I-Garden Pruning Hedge Trimming Shears Ingadi Yezikere Abasekeli | Chan Kee
Abakhiqizi be-White Pruner Scissors-
Ama-Shears amaGrey Pruner ama-3 aphuzi avela kuMkhiqizi weSikele
I-Garden Pruning Hedge Trimming Shears Ingadi Yezikere Abasekeli
I-SK5 blade egobile, isibambo se-PP ne-TPR.
Isikulufa esiqinile, intwasahlobo yensimbi engagqwali, ilokhi yokuphepha.
Isikele sokuthena ingadi senziwe ngensimbi engagqwali esezingeni eliphakeme. Futhi ukugawulwa kwesihlahla kukunikeza ukunemba kokunqunyiwe ngakunye. Ngemuva kokwelashwa kokushisa okuphezulu, kunezinzuzo zobulukhuni obuphakeme, akulula ukugqoka, ukuqina okuhle nezindwangu ezibukhali.
Isibambo se-anti-slip ne-ergonomic senza ukuthi isikezi sokugunda ingadi sikhululeke kakhudlwana esandleni sakho.
Umklamo omusha wokhiye wokuphepha wobungcweti wenza ukugawulwa kwesihlahla kube lula kakhulu ukusebenzisa futhi kuphephe ukusebenza. Isiqeshana sokuvula / sokuvala esiphephile sisiza ukufihla i-blade ngesikhathi sokuphumula futhi sikwenze kube lula ukugcina ngokuphepha.
Isikele esihle sokuthena ingadi sabalimi. Izikele zokuthena izingadi zokuthena amagatsha nokukha izithelo. Vele, ungathena futhi izitshalo ze-DIY ngokwakho. Inekhwalithi ephezulu, ukusebenza kahle okuphezulu futhi okuhlala isikhathi eside kakhulu.